Fehezanteny momba ny mpanjifa | Solar Solve Marine
Ny endri-tsoan'ny Solar Solve Solve Solve rehetra dia natao. Zava-dehibe ny hanomezan'ny mpanjifany fanazavana marina momba ny habe, ny endriny ary ny endriky ny varavarankely.
Solar Solve dia tsy azo raisina ho tompon'andraikitra amin'ny sandan'ny tsy mety.
Fanampiana sy torohevitra: Please Mifandraisa aminay Ho fanampiana sy toro-hevitra amin'ny fandrefesana ny fiarovana ny varavarankely dia tsara fitondran-tena.
TOP TIP: Rehefa mampiasa ny fampiasana azy mandrakariva metaly Tape measure.
Miangavy anao azafady fa afaka manaraka ny torolàlana video na ireo voasoratra eo ambanin'ny lahatsary ianao.
Ahoana no handrefesana ny varavarankely?
Ahoana ny fandrefesana ny sakan'ny varavarankely sy ny haavony (ao anatin'izany ny recess ivelany):
Torolàlana voasoratra (Ao ambadiky ny ilany havia, ivelan'ny ilany havia):
Fandrefesana tsara ny sakany "A" amin'ny teboka 2. Io no hamantarana ny fitsaharana sy ny baravarankely, ohatra, Square / Rectangular na Tapered. Dia refesaho tsara ny Recess Drop "B" izay koa ilay Drop Drop. Raha voafantina ny fitsaharana ao anaty dia hamerenan'ny Solar Solve ny 6mm amin'ny sakany omena, hahazoana ny Width Width ary hiantohana tsara ny efijery / efijery ao anatin'ny fitsaharana.
Manapaha hevitra hoe aiza no hametrahana ny jamba / efijery ary refeso tsara ny sakany "W" amin'ny teboka 2. Io no hamantarana ny fitsaharana sy ny baravarankely, ohatra, Square / Rectangular na Tapered. Dia refesaho tsara ny Drop "D". Omeo ny refy "W" amin'ny refy WIDTH (PW na CW) ivelany ary ny refy "D" amin'ny RDOP RD. Raha voafantina ny fitsaharana any ivelany dia tsy hisy fanesorana ny sakany.
FANAMARIHANA: Miangavy anao mba manadino ireo fanodikodinam-boto toy ny fiara mpitatitra fantsom-basy, fanodidinam-bozaka ary fitaovana hafa mety hiorina na eo akaikin'ny varavarankely, satria mety hanelingelina ny fandefasana ny efijery. Ekeo koa fa ny habeny / jiro dia mila havaozina rehefa tafapetraka miaraka amin'ny zoro.
Manoro hevitra izahay Uni-vahaolana ny fonosana ho an'ny fametrahana ny rindrina ivelany.
Loko misy sarimihetsika
volamena Grey Gold
Bronze varahina varahina
Sunblinds / Screen - endrika misy
Tsindrio eto raha hijery ny endriky ny sary
Trapezium / Rhomboid / Parallelogram Voafaritra varavarana:
Raha voafetra ny habaka eo an-tampon'ilay varavarankely, dia tsy ho rakotry ny horonantsary / lamba ny faritra misy ny A.
Raha ny toerana eny an-tampoka dia ahafahan'ny rindran-damina / manontam-pirinty hanitatra ny sakan'ny fanampiny / ny lamba dia ahafahana manarona ny fitaratra rehetra.